कञ्चनपुरमा सुत्केरी बाख्रीलाई ‘करणी’ गरेपछि…. – Satyapati
कञ्चनपुरमा सुत्केरी बाख्रीलाई ‘करणी’ गरेपछि….
महेन्द्रनगर । सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर कञ्चनपुरमा एउटा अपत्यारिलो घटना भएको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ मा सुन्दा पनि आङै सिरिङ्ग हुने अपत्यारिलो घटना घटेको हो ।
घरमा पालेको सुत्केरी बाख्रीलाई एक युवकले करणी गरेको भन्दै यहाँका निर्वाचित वडा सदस्य तर्कराज भट्ट इलाका प्रहरी कार्यालय झलारी पुगेका छन् । ती युवामाथि यसअघि पनि गाई करणी गरेको आरोप लागेको र त्यसैको शंकाका आधारमा उनीबिरुद्ध उजुरी परेको छ ।
‘वडा सदस्य ज्यूले स्थानीय एक युवाले बाख्री करणी गरी मारेको भन्दै उजुरी गरेपछि हामीले ती युवालाई सोधपुछ गरी परिवारको जिम्मा लगाएका छौं,’ प्रहरी निरीक्षक कर्णबहादुर बोहरा भने । यसअघि पनि ती युवामाथि गाई करणी गरेको आरोप लागेको थियो ।
यो घटना भुसको आँगोझै फैलियो । वडा सदस्यले घटनाको यर्थात छानबिनको माग राखे । उनले नै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरमा सम्पर्क गरी पशु चिकित्सक पठाई दिन आग्रह गरे ।
केन्द्रले घटनास्थलमा डा.दिनेश पन्तलाई पठाएको थियो । ‘वडा सदस्यले हामीलाई खबर गरेपछि डाक्टर पठाएका थियौं,’ केन्द्रका प्रमुख डा.पानसिंह ठगुन्नाले भने, ‘बाख्रीको नमूना संकलन गरेर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखालाई दिएका छौंं ।’
ती युवकले नै बाख्रीलाई करणी गरेर मारेको वडा सदस्यको दाबी छ । ‘उनले यसअघि पनि गाई करणी गरेका हुन्, हिजो उनलाई हामीले घटनास्थलमै देखेका थियौं,’ वडा सदस्य भट्टले भने । उजुरी परेपछि घटनाबारे छानविन भइरहेको प्रहरी निरीक्षक बोहराले बताए ।
पूर्वमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले आज नयाँ दल ‘जप्रपा’ घोषणा गर्दै
आरसी रिमालको ‘आमा’ सार्वजनिक
म्यादी प्रहरीका लागि झन्डै चार लाखले दिए आवेदन
स्थानीय निर्वाचन : तिलाको अध्यक्षमा ‘विन्दमान’को दावी
असार २२ गतेदेखि भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप दिइने